बेलकाः जनताको घर–दैलोमा लोकतन्त्र – हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ जेष्ठ ५, सोमबार १२:४१
उदयपुर पूर्वी भेगको बेलका नगरपालिकाले साढे दुई वर्षको कार्यकालमा कोरोना रोकथाम, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरेका स–साना काम स्थानीय जनप्रतिनिधिले घर–दैलोमा जनतालाई कसरी सेवा पु¥याउन सक्छन् भन्ने उदाहरण भएका छन् ।
गोपाल दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कोभिड–१९ को संक्रमणका वेला नगरभित्र छिरेका १४८ जनालाई नगरका चार वटा क्वारेन्टाइनमा राखेर २९ वैशाख २०७७ मा घर फर्काएको छ । क्वारेन्टाइनमा पनि नगरले उनीहरूलाई अरूतिर जसरी खाली हात राखेन । करेसाबारी र कृषि सम्बन्धी तालिम दिएर घर फर्किने वेला सबैलाई निःशुल्क ११ थरी तरकारीको बीउ समेत दिएर विदा ग¥यो ।
क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई नगरले योग–मनोपरामर्श अनि कोरोनाबाट आफू र वरिपरिकालाई जोगाउने उपाय पनि सिकाएको थियो । तालिम सकेर घर जाने वेला सबैको परीक्षा लिइएको, व्यक्तिगत प्रोफाइल तयार गरेर नियमित फलोअप गरिएको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार नगरले क्वारेन्टाइनमा राखेका सबैको कोरोना परीक्षण पनि गरेको थियो ।
नगरपालिकाले कोरोनाका कारण नगरभित्रको कृषि र पशुपालनमा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन शुरू गरिसकेको छ । कोरोनापछि नगरवासीलाई कृषिमा थप उत्प्रेरित गर्न धानको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति लागू गरिएको छ । वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष मोहनप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “कोरोनापछि कृषिलाई नचम्काई संकट धान्न सकिंदैन । त्यसैले हामी कृषिमा थप सक्रिय भएर अहिलेदेखि नै लागिसक्यौं ।”
बेलकाको घुम्नेमा तरकारी खेतीमा मुसहर समुदाय ।
कोरोना अघि पनि नगर हात बाँधेर बसेको थिएन । त्यसैले नगरपालिका–५ घुम्नेका मुसहर समुदायलाई अचेल बारीभरि फलेका काउली, भान्टा (बैगुन), बन्दा र साग टिप्न अनि बेच्न चटारो छ । आफैंले बनाएको प्राङ्गारिक मल हालेर मुसहर समुदायले फलाएका तरकारी किन्न स्थानीयहरू बारीमै पुग्छन् । घुम्ने पुग्ने जो–सुकैले देख्न सक्छ– मुसहर महिला तरकारी टिप्न व्यस्त भएको र बालबालिका कापीमा आफैंले लेखेका अंग्रेजी शब्दहरू दोहो¥याएर पढिरहेको । मुसहर बस्ती अहिले हरियाली भएको छ ।
घुम्नेका मुसहर पहिला अरूको खेतबारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्थे । तिनका छोराछोरीले पढ्न पाएका थिएनन् । जीवन धान्न कठिन थियो । बेलका नगरपालिकाले उनीहरूलाई मल बनाउने र तरकारी खेती गर्ने तालिम दियो । नगरको अग्रसरतामा कृषक समूह गठन भयो, नगरले बीउ र २२ कट्ठा जग्गा व्यवस्था गरिदियो । यसले मुसहर समुदायलाई तरकारी खेती गर्ने बाटो खुल्यो ।
अहिले उनीहरूले यो जग्गामा तरकारी फलाएका छन् । घुम्ने तरकारी खेती कृषक समूहकी कोषाध्यक्ष समरिता सदा भन्छिन्, “पहिला खानै पुग्दैनथ्यो । अहिले बैगुन, हरियो काउली फलाएका छौं । १५/१६ हजार कमाइ पनि हुन्छ । जीवन नै बदलिएको छ ।”
मुसहर बस्ती हराभरा बन्नुको कारण हो– बेलका नगरपालिकाको कृषि नीति । नगरका १० प्राथमिकतामा कृषि र पशुपक्षी पहिलो स्थानमा छ । नगरले अशक्तलाई खाद्यान्न दिने तर गरिखान सक्नेलाई सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई ‘उत्पादनको आधार वर्ष’ घोषणा गरेको नगरले ‘उत्पादनमा हाम्रो साथ, बस्दिनँ म खाली हात’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । यही नीति र नारालाई लागू गर्न मुसहर बस्तीमा नमूना कृषि समूह मार्फत कृषि उत्पादन शुरू गरिएको बेलकाका मेयर दुर्गाकुमार थापा बताउँछन् ।
बेलका नगरपालिका परिसरमै ‘कृषि सिकाइ केन्द्र तथा प्रदर्शनी स्थल’ खोलिएको छ । त्यहाँ साग, गोलभेंडा, मेथी, धनियाँ, काउली रोपिएका छन् । बाँसको नर्सरी लगाइएको छ । नगरपालिका पुग्नेले तरकारी किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तरकारी नकिन्नेहरूले पनि त्यहाँका कृषकको कृषि कर्म बारे केही न केही सिकेर फर्किने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगरले बेलकामा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु बिक्री तथा निर्यात गर्न १२ वटा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । नगरले गत वर्ष ५० हेक्टरमा सामूहिक मकै खेती गरेको थियो । त्यहाँबाट १७ हजार क्विन्टल मकै उत्पादन भयो । यसपटक पनि तीन ठाउँमा करीब एक हजार बिघामा चाक्लाबन्दी खेती शुरू गरिएको छ । कृषिमा नगरले गएको साल रु.७ करोड लगानी गरेको थियो भने चालु आवमा त्यो रकम रु.१२ करोड पुग्ने अनुमान छ ।
कृषिको श्रीवृद्धिका लागि नगरभरि ३०० हाराहारीमा कृषक समूह गठन भएका छन् । उनीहरूलाई नगरपालिकाले तालिम, बीउ र त्यहाँ उत्पादन भएका सामान बेच्ने व्यवस्था समेत मिलाइदिन्छ । नगर परिसरमै संकलन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ ।
पशुपालन गर्ने कृषकले उत्पादन गरेका खसी–बोका संकलन केन्द्र पनि बन्दैछ । आउँदो वर्षदेखि कृषकले आफ्ना उत्पादन संकलन केन्द्रमा ल्याएपछि नगरपालिकाले नै किनिदिने तयारी गरिएको छ । बेलकामा उत्पादित गुन्दु्रक, तितौरा–मस्यौरा किन्न ‘रासनपानी डटकम’ सँग सहकार्य गरिएको छ ।
ज्येष्ठलाई निःशुल्क चिया
५४ हजार १२२ जनसंख्या रहेको बेलका नगरपालिकाले बनाएको ‘भिलेज प्रोफाइल’ मा विपन्न र अति विपन्नहरूको सूची तयार गरिएको छ । ‘भिलेज प्रोफाइल’ अनुसार यसअघि नगरमा जनसंख्याको २२ प्रतिशत तीन महीना मात्र खान पुग्ने स्थितिका थिए । अहिले त्यो संख्या १० प्रतिशतमा झरेको छ ।
बेलका नगरपालिकाले जाडोमा स्थानीयलाई वितरण गरेको न्यानो कपडा ।
नगरले कतिसम्म व्यवस्थित तथ्याङ्क तयार गरेको छ भने नगरमा काम गरेर खान नसक्ने अवस्थाका व्यक्ति ६५ जना छन् । तिनलाई टोल विकास संस्थाले वडा र वडाले नगरपालिकामा सिफारिश गरेपछि ‘अति विपन्न परिचय पत्र’ वितरण गरिएको छ । उनीहरूलाई निर्देशिका बमोजिम मासिक १५ किलो चामल, दुई किलो दाल, दुई लिटर तेल र एक किलो नून घरमै पु¥याइदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मागेर खाने, अर्काको घरमा भाँडा माझेर गुजारा चलाउने, आश्रय विहीन र दीर्घ रोगीलाई नगरले यो सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यो सुविधा पाइरहेकी बेलका–८ की पम्फासरी राई भन्छिन्, “पहिला कसैले नदिए खान पाइन्नथ्यो, अहिले भोकै बस्नु पर्ला भन्ने चिन्ता छैन ।”
त्यसो त ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा नगरपालिकाले निःशुल्क चियाको व्यवस्था गरेको छ । बेलकाको रामपुर बजारमा दैनिक ५० भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क चिया पिउँछन् । त्यो पैसा नगरले तिरिदिन्छ । यो वर्षदेखि नगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई चिया वितरण गर्न एक जना सहयोगी खटाउने तयारी गरेको छ ।
बेलका–९ का ८१ वर्षीय सूर्यबहादुर थापा नगरपालिकाले निःशुल्क उपलब्ध गराएको चिया पिउन दैनिक पसल पुग्छन् । थापा भन्छन्, “नगरपालिकाले माया गरेर हामीलाई निःशुल्क चियाकोे सुविधा दिएको हो । खुशी भएर पिउँछौं ।” उनका अनुसार नगरले वृद्ध भत्ता घरमै पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ ।
समस्यामा परेका नगरवासीलाई तत्काल सेवा दिन नगरपालिकाले ‘जहाँ अभर त्यहाँ नगर’ (सपोट अन द स्पट) कार्यक्रम लागू गरेको छ । विपन्न र विपत्मा परेकालाई सहयोग गर्न नगरले ‘युवा स्वयंसेवक समूह’ गठन गरेको छ । नगरले सर्पले डसेर, रूखबाट लडेर वा दुर्घटनामा परेर घाइते भएकालाई तत्काल उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नगरले १३५ जना यस्ता व्यक्तिलाई रु.७ लाख खर्च गरेको बेलकाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ मा उल्लेख छ । क्यान्सर पीडितलाई नगरले उपचारमा जान गाडीभाडा र खाजा खर्च दिने गरेको छ । क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी सीता घिमिरे भन्छिन्, “नगरपालिकाले गाडीभाडा र खाजा खर्च दिंदा थोरै भए पनि राहत मिल्यो ।”
मातृ मृत्युदर शून्य
कोरोना संकटका कारण अत्यावश्यकीय औषधि नपाएका नगरवासीलाई धरान र विराटनगरबाट औषधि ल्याएर घर–घरमा पु¥याउन नगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका गाडी एम्बुलेन्सकै रूपमा प्रयोग गरिए । त्यस्तै कोरोनाको मारमा परेका सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई नगरले अरूलाई भन्दा थप खाद्यान्नसहित राहत उपलब्ध गराएको थियो ।
अरू वेला प्रयोग हुने नगरका दुई वटा एम्बुलेन्स लकडाउनको अवधिमा झन् बढी प्रयोग भए । त्यसमध्ये एउटा चाहिं ‘सुरक्षित मातृत्व एम्बुलेन्स’ का नामले चिनिन्छ । यो एम्बुलेन्समा गर्भवती महिला प्रसूतिका लागि अस्पताल जाँदा निःशुल्क सेवा दिने गरिएको नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव नुनीराम राई बताउँछन् । राई भन्छन्, “यो एम्बुलेन्सले अरू वेला बिरामी पनि बोक्छ तर गर्भवती पहिलो प्राथमिकता हो । यसले नगरमा मातृ शिशु मृत्युदर शून्यमा झारेको छ ।”
बेलका नगरले दिएकोे तालिमपछि आफ्नो सीप देखाउँदै एक सहभागी ।
नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाको तथ्याङ्क अनुुसार दुई वर्षअघिसम्म बेलकामा वार्षिक १२०० गर्भवती हुन्थे, उनीहरूमध्ये ३०० जनाले मात्रै अस्पतालमा बच्चा जन्माउँथे, बाँकी घरमै सुत्केरी हुन बाध्य थिए । घरमै सुत्केरी हुँदा दुईदेखि तीन आमाको मृत्यु हुने गरेको थियो । अहिले नगरपालिकाले गर्भवती भएदेखि नै उनीहरूलाई ‘बधाई पत्र’ पठाएर नियमित स्वास्थ्य जाँचदेखि अस्पतालमै प्रसूति गराउन थालेको छ ।
प्रसवको वेला एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर सुत्केरीलाई अस्पताल ल्याउने व्यवस्था नगरले गरेको छ । सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख गोपाल निरौला भन्छन्, “गएको वर्ष त नगरमा एक जना आमाको ज्यान गयो । यसपालि मातृ मृत्युदर शून्यमा झारिएको छ ।” नगर एम्बुलेन्सका चालकलाई बिरामीलाई अस्पताल पु¥याएर बेडमा भर्ना गर्न सहयोग गर्न र बिरामीका आफन्तलाई औषधि ल्याउने, बिल काट्ने ठाउँ देखाउन भनिएको हुन्छ ।
अस्पतालसँगको सहकार्यमा नगरले स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको दाबी गरेको छ । नगरका अनुसार, गएको वर्ष काठमाडौंका शिक्षण अस्पताल, ललितपुरको लेलेस्थित आनन्द भवन अस्पताल, विराटनगरका नोबेल, विराट अस्पतालमा ४० जनाको उपचार गरिएको थियो ।
अपाङ्गता भएका ३३ जनाको त काभ्रेस्थित अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा उपचार भइरहेको नगर प्रमुख थापा बताउँछन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएर उपचारमा समस्या भएका बेलका–८ का हर्षबहादुर विश्वकर्माको लेलेको अस्पतालमा खुट्टा काटिएको थियो । नगरकै सहयोगले आफ्नो ज्यान बचेको उनले बताए ।
बेलकामा सर्पदंशको चर्को समस्या थियो । नगरले सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्दागर्दै सर्पको टोकाइबाट स्थानीय अस्मिता राईको मृत्यु भयो । त्यसपछि उनैको नाममा नगरपालिका भित्रै ‘अस्मिता राई स्मृति सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र’ खोलिएको छ ।
पहिला नेपाली सेनाको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा काम गरेर अवकाश पाएका बेलकाकै राजेश भट्टराईलाई सर्पदंशको उपचारका लागि नियुक्त गरिएको छ । उपचारमा संलग्न भट्टराईका अनुसार केन्द्रबाट हालसम्म २२७ जना सर्प पीडितले उपचार पाएका छन् । अहिले सर्पको डसाइबाट कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन ।
नगरले मेची आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा आँखा उपचार केन्द्र चलाएको छ । सामाजिक विकास शाखाको तथ्याङ्क अनुसार यहाँबाट दुई वर्षमा २२४ जनाको निःशुल्क अप्रेशन गरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा रु.२३ करोड बजेट भएको बेलकाले शिक्षामा मात्र रु.३ करोड छुट्याएको थियो । नगरका सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न नगरपालिकाले आफ्नै शैक्षिक मोडलको विकास गरेको छ । नगरका ५३ विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका सदस्यले पालैपालो विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भई पठनपाठन रेखदेख गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
बेलका नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सरफ बनाउने तालिमका सहभागी ।
शिक्षक अभाव भएका विद्यालयका लागि नगरपालिकाले ११० स्वयम् सेवक शिक्षक नियुक्त गरिदिएको छ । यसपटक शिक्षक व्यवस्थापनकै लागि नगरले डेढ करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यसबाहेक विपन्न समुदायका बच्चालाई ट्यूसन पढाउन मुसहर बस्ती र पुरन्दहमा दुई जना शिक्षक राखिएको छ । खेल क्षेत्रमा लागेका विद्यार्थीलाई नगरपालिकाले नै ट्यूसन पढाइदिने व्यवस्था गरेको छ ।
गएको वर्ष एसईई रिजल्टको भोलिपल्टै स्कूलहरूको समीक्षा बैठक भयो । गणितमा धेरै फेल भएको पाएपछि नगरका माध्यमिक विद्यालयहरूमा गणित शिक्षक ल्याएर कोचिङ शुरू गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न नगरको पहलमा पढाउने तरिका बदलिएको छ ।
सबै विद्यालयमा अंग्रेजी सिकाउने सफ्टवेयर ‘टकिङ टिचर’ राखेर पठनपाठन गराइन्छ । विद्यालयमा ह्यान्ड राइटिङ तालिम, स्यानिटरी प्याड वितरण, अति विपन्नलाई खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । स्रोतव्यक्ति राई नगरको शिक्षाको स्तर पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर सुधार भएपछि दुई वर्षयता निजी बोर्डिङ स्कूलबाट २२५ जना विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा आएका छन् । सबै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, नगरपालिका र जनप्रतिनिधि बसेर आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाउने प्रतिबद्धता पत्र नै सार्वजनिक गरेका छन् । ज्ञानज्योति आधारभूत माविका प्रधानाध्यापक रेश्मी बान्तवाले आफ्ना दुई बच्चा निजी स्कूलबाट सारेर हाल सरकारी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।
नगरले आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर र पाठ्यक्रम बनाएको छ । नगरका ५३ वटै स्कूलमा मन्टेसरी कक्षा छन् । बिजुली पुगेका २२ स्कूलमा स्मार्ट क्लास चलेको छ । २०७६ असारमा निर्णय नै गरेर रक्सी पिउने, पढाइमा ध्यान नदिने तीन जना शिक्षकको तलब रोक्का गरिएको थियो । तीमध्ये दुई जनालाई भने पत्नीसहित आएर ‘आइन्दा यस्तो नगर्ने’ कागज गरेपछि फुकुवा गरियो ।
तिनैमध्येका शिक्षक माधवप्रसाद काफ्लेको भने अहिले पनि दुई महीनादेखि तलब रोक्का गरेर निगरानीमा राखिएको छ । नगर प्रमुख थापा भन्छन्, “पहिला कति विद्यालयमा पुग्दा गाई–बाख्रा बाँधेको भेटिन्थ्यो अहिले गएर हेर्दा आफैंलाई आनन्द लाग्छ ।”
१४ पुस २०७६ मा बेलका वडा नं. ४ को हरिपुर टोलमा ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रम चल्दैथियो । टोलका ८ घरमा अति विपन्न परिवारले शौचालय बनाउन नसकेको कुरा उठ्यो । तत्कालै नगरका प्राविधिक र जनप्रतिनिधिले कर्कटपाता, सिमेन्ट र प्यान दिने र स्थानीयले श्रमदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यो निर्णय १६ दिनमै कार्यान्वयन गरिएको नगर प्रवक्ता मोहनप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । त्यहींको खन्युँ खोला खानेपानी योजनामा ६०० मिटर पाइप नहुँदा २८ घरले पानी पाएका रहेनछन् ।
नगरपालिकाले उत्पादन गरेको तरकारी देखाउँदै मेयर थापा ।
स्थानीयले बिजुली नभएको गुनासो गरे । घिमिरेका अनुसार त्यो जनगुनासो पनि दुई साताभित्र नै सम्बोधन गरियो । नगरको निर्देशिकाले नै जहाँ जनप्रतिनिधि पुग्छन्, त्यहाँ कुनै काम अत्यावश्यक देखेमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैलाई ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ नाम दिइएको छ ।
नगर उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले हालसम्म ६०० हाराहारीमा न्याय निरुपण गरिसकेको छ । यो वर्षमा मात्रै १०५ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ८ वटा अदालत पठाइयो अरू नगरपालिकाले नै समाधान ग¥यो । उपप्रमुख चौधरी भन्छिन्, “नगरपालिकाले विद्यार्थी, किशोरकिशोरीदेखि विभिन्न क्षेत्रलाई कानूनबारे छलफल गराउने गरेको छ । यहाँ आएका मुद्दा सकेसम्म यहीं मिलाउने कोशिश गर्छौं ।”
नगरमा अल्पसंख्यक र पछाडि परेका थारू, थामी, माझी, चौधरी, भुजेल, पहाडे र मधेशी दलितका छुट्टाछुट्टै उत्थान विकास समिति गठन गरिएका छन् । नेकपाको बहुमत रहेको बेलकामा नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव जितेका वडा नं. १ का अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको संस्थागत विकास समितिका संयोजक दिनेश्वर चौधरी भन्छन्, “विकासमा सबै जाति, क्षेत्रलाई सहभागी गराएर काम गरिरहेका छौं । सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइएको छ ।”
एक लाख वृक्षरोपण
बेलकाले नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेर एभोकाडो, कटहर र तेजपत्ताका १६०० बिरुवा रोपेको छ । नगरपालिकाको वन तथा वातावरण समितिका संयोजक तथा वडाध्यक्ष वसन्तकुमार मगरका अनुसार नगरभरि २०७६ साउन यता तेजपत्ता, कटहर, लिची, बाँस र विभिन्न घाँसका गरी एक लाख वृक्षरोपण गरिएको छ । त्यसबाहेक केराका २० हजार र भुईंकटहरका २० हजार बिरुवा पनि रोकिएको छ । सुगाचरी भीरमा गिद्ध संरक्षण गरिएको छ । पर्यटनको विकासका लागि बेलकामा पाराग्लाइडिङ तालिम शुरू भएको छ ।
बेलका नगर कार्यपालिकाको २६ चैत २०७४ को बैठकले विपक्षी दलको कार्यालय खोल्ने र विपक्षीलाई अनुगमन समितिको सदस्य राख्ने निर्णय ग¥यो । र कार्यालय पनि खोल्यो तर विपक्षी नेपाली कांग्रेस भने कार्यालयमा आएर बस्न मानेको छैन । नेपाली कांग्रेस बेलका नगर सभापति सुशील सेढाईं भन्छन्, “स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष हुने कुुरा संविधानमा व्यवस्था नभएको र पार्टीले पनि निर्णय गरिनसकेकाले त्यो कार्यालयमा गएनांै ।”
बेलका नगरपालिकाको काम तपाइँलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा विपक्षी दलले अन्यत्र दिनेजस्तो प्रतिक्रिया सेढाईंले पनि दिएनन् । उनले भने “कांग्रेसले आफ्नै तरिकाले नगरका कामको अनुगमन गरिरहेको छ । सर्वदलीय बैठकमा नियमित जान्छौं । नगरकै हितका लागि गरेको राम्रो काममा साथ पनि दिन्छौं ।”
पहिलेका ठोक्सिला, तपेश्वरी, मैनामैनी र कटुन्जे बबला गाविस जोडेर २०७३ सालमा बेलका नगरपालिका बन्यो । १४ असार २०७४ मा भएको स्थानीय चुनावमा नेकपाका उम्मेदवार दुर्गाकुमार थापा (स्वस्ति) ले नगर प्रमुखमा जितेका थिए ।
नगरपालिका हुनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार केही थिएन । अस्थायी प्रकृतिका घर बनाएर काम गर्न थाल्यौं । तर अहिले नगरले विकास र समृद्धिको लय समातेको छ । स्थानीय बुद्धिजीवी भूषण राई नगरपालिकाले शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा राम्रो लगानी गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नगरपालिकाको नीति राम्रो छ । अब विकासमा नागरिक स्वतस्फूर्त रूपमा लाग्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।”
केही समयअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषाल ‘विकास’ हेर्न बेलका पुगेका थिए । मन्त्रीले नगरप्रमुख थापालाई मन्त्रालय बोलाएर कृषिका लागि सहयोग समेत गरेका छन् । एक नम्बर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. राजेन्द्र उप्रेती र सचिव डा.विमलकुमार निर्मलले पनि बेलकाको विकास अवलोकन गरेर टिप्पणी लेखेका छन् ।
‘…साना किसानलाई समेटिने गरी संचालित कृषि कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको देखियो । त्यस्तै एग्रो टुरिजम, होमस्टे, भूमि व्यवस्थापन, चाक्लाबन्दी, सामूहिक खेती जस्ता कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको देखिन्छ ।’ उनीहरूले संयुक्त रूपमा आगन्तुक पुस्तिकामा लेखेका छन्, ‘व्यवसायोन्मुख बाख्रा संकलन केन्द्र, तरकारी कार्यक्रम, दलित जनजातिमा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अवलोकन गर्दा अत्यन्त खुशी लागेको छ । यस्ता कार्यक्रमहरू उदाहरणीय रूपमा सञ्चालन भएका छन् ।’
२०७६ भदौमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भनेर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका अध्यक्ष खड्गबहादुर परियार बेलका नगरको काम प्रदेश र देशकै लागि पनि नयाँ मोडल भएको बताउँछन् । भन्छन्, “बेलकाबाट अन्य नगर र गाउँहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । विकासलाई कसरी व्यावहारिक र समानुपातिक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाएको छ बेलकाले ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागको ‘समावेशी लोकतन्त्र र स्थानीय सुशासन’ विषयक अनुसन्धानका लागि माघ पहिलो साता बेलका नगरपालिका पुगेका मानवशास्त्री सुरेश ढकाल र जनक राईलाई पनि बेलकाको विकासको अभ्यास नयाँ लाग्यो । उनीहरूले ट्वीटरमा समेत यसको चर्चा गरे ।
अनुसन्धानका क्रममा केही दिन बेलका नगर घुमेर काठमाडौं फर्किएका समाजशास्त्री ढकाल स्थानीय सरकारहरू दिशा नपाएर अलमलमा परिरहेका वेला बेलकाले विकासमा नयाँ अभ्यास गरेर देखाइरहेको बताउँछन् । “बेलकाले जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ, अहिले नै त्यसको परिणाम देखिने वेला त भएको छैन । हेर्दा साना–साना लागे पनि जनतालाई छुने खालका काम भएका छन् । विकासमा सबै समुदायलाई समेटेर समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएको छ”, ढकाल भन्छन् ।
Spread the loveचिनियाँ राष्ट्रगानसम्बन्धी एउटा प्रस्तावित कानुनबारे विवाद उत्पन्न भएपछि हङ्कङको संसदमा झडप भएको छ । त्यसक्रममा केही प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूलाई घिसारेर बाहिर निकालिएको छ । प्रस्तावित कानुनमा चिनियाँ राष्ट्रगानको अनादरलाई अपराध मानिने प्रावधान छ । उक्त अध्यादेशलाई प्रभावित पार्न सक्ने एउटा संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सांसदहरूबीच विवाद भएको थियो । संसद्बाट […]